Ogaden News Agency (ONA) – Diyaarad Turkiga Laga Lahaa oo Iiraan Ku Burburtay.
Diyaarad Turkiga Laga Lahaa oo Iiraan Ku Burburtay.
11 qof oo saarnaa diyaarad laga leeyahay dalka Turkiga ayaa dhintay kaddib markii diyaaraddii ay saarnaayeen ay ku burburtay galbeedka dalka Iiraan, sida ay ku warrantay warbaahinta dalkaasi.
Diyaaraddan khaaska ahayd ayaa ku burburtay meel u dhow magaalada Shahr-e Kord oo ku taal gobolka galbeedka Iiraan ku yaalla ee Chahrmahal-Bakhtiyari. Afhayeen u hadlay shaqaalaha gargaarka deg degga ah ayaa warbaahinta u sheegay in diyaaraddu ay ku dhacday deegaan buuralley ah kaddibna uu dab qabsaday.
Waxaa lagu soo warramayaa inay ka timid dalka Isku-Taga Imaaraadka Carabta (UAE) kuna sii jeedday magaalada Istanbul markii uu shilku dhacay. Reza Jafarzadeh, ayaa sheegay in diyaaraddu ay sidday siddeed rakaab ah iyo saddex ka mid ah shaqaalaha diyaarradda. Diyaarradda waxaa lahaa ganacsade u dhashay dalka Turkiga oo lagu magacaabo Hussein Basaran.
Gabadhiisa iyo toddoba ka mid ah saaxiibbadeed ayaa saarnaa waxayna ka soo laabteen xaflad ka dhacaysay Dubai markii ay burburtay, sida ay sheegtay warbaahinta Turkigu. Madaxa Bisha Cas ee Turkiga ayaa sheegay in aysan jirin cid ka badbaadday shilkaasi. Bishii la soo dhaafay, diyaarad sidday 66 qof ayaa ku dhacday buuraha Zagros ee dalka Iiraan kuwaas oo sidoo kale ku yaal galbeedka dalkaasi.